JOHANNESBURG (AP) — The Latest on Cyclone Idai and the flooding damage to Mozambique, Zimbabwe and Malawi (all times local): 7:10 p.m. United Nations deputy spokesman Farhan Haq says the U.N. will ask the international community for money to help victims of Cyclone Idai but "at this stage what we want to do is underscore the sheer level of this crisis."
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa, center with scarf, visits Chimanimani about 600 km south east of Harare, Zimbabwe, Wednesday March 20, 2019. Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A family dig for their son who got buried in the mud when Cyclone Idai struck in Chimanimani about 600 kilometres south east of Harare, Zimbabwe, Tuesday, March, 19, 2019. According to the government, Cyclone Idai has killed more than 100 people in Chipinge and Chimanimani and according to residents the figures could be higher because the hardest hit areas are still inaccessible. Some hundreds are dead, many more are missing, and some thousands at risk from the massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
Soldiers and paramedics carry injured survivors from a helicopter in Chimanimani about 600 kilometres south east of Harare, Zimbabwe, Tuesday March, 19, 2019. According to the government, Cyclone Idai has killed more than 100 people in Chipinge and Chimanimani and according to residents the figures could be higher because the hardest hit areas are still inaccessible. Some hundreds are dead, many more are missing, and some thousands at risk from the massive flooding throughout the region of Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A woman does her laundry near a mountain where a mudslide caused by Cyclone Idai killed several people in Chimanimani about 600 kilometres south east of Harare, Zimbabwe, Tuesday March 19, 2019. According to the government, Cyclone Idai has killed more than 100 people in Chipinge and Chimanimani and according to residents the figures could be higher because the hardest hit areas are still inaccessible. Some hundreds are dead, many more are missing, and some thousands at risk from the massive flooding throughout the region of Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A soldier carries shovels during a rescue operation in Chimanimani about 600 kilometres south east of Harare, Zimbabwe, Tuesday, March, 19, 2019. According to the government Cyclone Idai has killed more than 100 people in Chipinge and Chimanimani and according to residents the figures could be higher because the hardest hit areas are still inaccessible. Some hundreds are dead, and many more still missing with many thousands at risk from massive flooding in the region of Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A soldier carries a rope during a rescue operation in Chimanimani about 600 kilometres south east of Harare, Zimbabwe, Tuesday, March 19, 2019. According to the government Cyclone Idai has killed more than 100 people in Chipinge and Chimanimani and according to residents the figures could be higher because the hardest hit areas are still inaccessible. Some hundreds are dead, and many more still missing with many thousands at risk from massive flooding in the region of Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.